2017. Yangu nhema nhema yeYankees, Vikings, Italians, Gauls uye nyika | Zvazvino Zvinyorwa
2017 inopa kufa kwayo kwekupedzisira. Rimwe gore ratakadya, takanwa nekuverenga. Yangu yanga ichinyanya kukwana com mabhuku anodarika makumi matatu ayo akapfuura nepakati pemaziso angu, pabepa kana manhamba. Ini handina kumbobata mamwe marudzi (enhoroondo uye erudo), asi yakajairika parishi yatoziva kuti yandinoda nhema.
Zvave nhau nekuverenga zvakange zvadarika. Heterogeneous panorama zvakare ine yekutanga nzira yekufona nyika noir. Asi iyo Gallic polar, inonaka mutauro weitaly uye, zveshuwa, rudo rwangu rusingaperi uye kumuda kwake kuchamhembe kunotonhora. Hongu, uye kuyemura kukuru dzimwe nyika dzekumusha. Chivabvu 2018 ramba uchiita rima kwazvo.
Ndakaverenga wongororo dzinoverengeka nezve Ruregerero izvo zvaive zvakakwana kundikurudzira kuti ndiverenge uye zvakafanana zvakaitika kwandiri ne Bull gomo. Uye maAmerican John Hart y Brian panovich Iwo ave angu matsva ekuwana egore kune rimwe divi redziva. Izvo zvishoma zvakawanikwa zvakadonha kubva kuHart Mambo wenhema uye zvakare yakanaka kwazvo Hapana magunguwo, uye maitiro ake akwanisa kundikwezva. Panovich, nekutamba kwake, anga ari iye akatenderedza iyo yanki quota yegore uye yakandisiira kuravira kweizvozvo nyika noir yevatambi nenzvimbo zvakatenderedza zvekuti ndinotarisira kuramba ndichirima gore rinouya.
Kubata kweItaly hakugone kushomeka nenhamba yevanyori vakanaka vanogovana izvozvo idiosyncrasy uye zvakanyanya kunyorwa manyorerwo mune genre noir. Mukumisikidza, mavara, nzira yekurondedzera ... Gore rino rakatanga na Maurizio De Giovanni uye mutungamiriri wake Luigi Alfredo Ricciardi ndakagara nemoyo wangu kune zvakasara. Saizvozvo zvakangotora mazuva makumi maviri nemashanu kupedza mazita matanhatu anoumba akateedzana kusvika zvino.
MaNaples ake emakumi matatu, mavara ake seanodakadza sezvaari azere nespark, yake yemweya pfungwa inokodzera zvakakwana mumhepo yenguva inoita iyi nhevedzano pamwe mudiwa wegore.
Uye padanda rakatarisana, kumanikidza, kuzvishingisa uye charisma huru yemupepeti weRoma anopandukira anova ndiye Rocco schiavonne de Antonio Mancini. En Zuva ramay, yenhau yechina, Manzini yatosvika zvizere mukukura mukukudziridzwa kweichi Schiavonne vakadzingwa kuAosta Valley nekuda kwekusazvibata uye dzidziso diki muRoma yake yaanoda. Pakupedzisira tinonzwa nezve zvakapfuura zvakashata zvakaratidza hunhu hwake. Saka ndichaenderera mberi netsoka dzavo kana vakatumira nyaya nyowani.
El polar Gaul anoramba achikanyaira. Lemaitre anoenderera nezve bhizinesi rake uye ichokwadi kuti zvinonetsa kusvika pakumuka kweiyo Camille Verhoeven, asi anotenderera Olivier Norek, iye refutenendi weParis anonyatsoziva kuti nyaya iyi ndeyei. Norek akazvidya zvese muna 2016 aine huru novel, Domino mhedzisiro, uye akatizivisa le kaputeni Victor mutengo, iyo inovimbisa kuenderera mberi ichipa yakawanda yekutamba. Ndinovimba zvakadaro nekuti yanga ichimirira kuverenga uye haina kumbondiodza moyo zvachose.
Kuwanikwa kwave kuri kurudziro yeshamwari idzodzo dzaunogona kuvimba nadzo nguva dzose. Uye ini ndicharamba ndichidaro saizvozvo. Mutungamiriri weMongolia yeruldelgger, kusikwa kwe Ian Manook (zita rekunyepedzera raPatrick Manoukian), chave chinhu chinonaka kwazvo chinogona kudzokororwa. Ndinovimba kuzviita gore rinotevera na Nguva dzesango, yake yechipiri novel, nekuti Vakafa mugwenga inogadzira gomba rakanaka mupanorama uye inonongedzwa neinoshamisa yakakwirira.
Ichokwadi icho Scar, de Juan Gomez-JuradoYakanga yatove nerwendo rurefu uye rwakabudirira, asi ini ndanga ndichiri kumirira uye ino zhizha ndakaritumira nekugutsikana. Iyo inopfuura nhema nhoroondo yecomputer saenzi simon sax uye kusangana kwake kunopfuura kunokanganisa neicho chisinganzwisisike Irina wedzera mumwezve ane hunyanzvi. Asi zvirokwazvo, ndinofanira kuverenga zvimwe zve vory v zakone (idzo dzinotyisa dzeRussia "mbavha dzemutemo") uye ini ndinowanzo dhiza musoro wekutanga.
Asi ndinofanira kutaurawo kuti ndakapedza gore rekuverenga nezuro nebhuku rekutanga nemumwe munyori mugari, Javier Alonso Garcia-Pozuelo. Bhokisi reSnuff Iyo inhau yakanaka kwazvo ine musanganiswa wevatema uye nhoroondo yemhando iyo inotizivisa isu kumuongorori anofanirwa kuteverwa pasi. Isu tinofanirwa kuperekedza mune dzakawanda zviitiko neMadrid yezana regumi nemapfumbamwe century Jose Maria Benitez. Mumota inonongedza, muSimon, kana chero zvazvingava kuburikidza nemumigwagwa iya yekati izere neruzivo. Rondedzero yakapfuma, yakajeka, uye yakanakisa yetsika uye nhoroondo, asi ndanga ndichida kuwedzera hunhu.
Uye isu tinopedzisa munzvimbo inotonhora yekuchamhembe kwenzvimbo dzangu mbiri nemazita ekuremekedza eViking. Betty, kubva kuIcelandic Arnold Indridason, Izvo zvakandisiira yakanaka kwazvo yekupedzisira kuti ini handina kuverenga chinhu chekuve pfupi pfupi mune yakasarudzika tsika yeiyo genre uye ine inoshanda kwazvo kumonyoroka mune yayo runyorwa uye mavara. Handina kupedza kubatana nemuongorori akabudirira Erlendur Sveinson, Asi nyaya iyi yakanyatsondibata.
Asi takapedza naye. Kwete gore risina Harry Hole. Izvo hazvina basa kana kuri kuverenga zvekare kana kuita zvitsva, asi isu vedu vanodanana nekusingaperi nechikara ichi cheNorway chine bheji uye chidhakwa vatoda kuvepo kwavo kwekunyora saiye Jim Beam muchetura. Gore rino takaita mhanza naye makore makumi maviri yekuzvarwa kwake uye yake yekupedzisira kesi mu Nyota.
Yegumi neimwe yenhau yeakateedzana yakatiunzira zviridzwa zvinotyisa uye mhondi dzisingaite idzo blond uye haggard hofori inogara ichivhima nehana yekurwisa nzira. Uye nehunyanzvi hwakawedzerwa hwepfungwa dzinorwara dzashe wake baba, Jo Nesbø, iyo inogona kungouya nebhawa. Tinogona zvakare taura naye muBarcelona uye takanyadziswa mu akakundikana firimu kuchinjika kwake kwechando murume. Uye mune iri pedyo 18 tichava nechiratidzo chake chaicho Macbeth uye zvinogona kushanya zvakare kune inotevera Madrid Bhuku Rakanaka, uko, Odin achida, ini ndinotarisira kukweretesa ruoko rwake ndokugwadama patsoka dzake.
Asi iyo ichave imwe nyaya yandinotarisira kuramba ndichitaura gore rinouya panguva ino. Panguva ino ngatifarirei gore nyowani rekunyora. Nhema, nhoroondo, kudanana, erotic, kudzidzira, nhetembo, yemitambo, kudzidzira kana memoir. Sezvo iwe uchida zvakanyanya. Happy 2018!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Nhema nhema » 2017. Yangu nhema nhema yeYankees, Vikings, Italians, Gauls uye nyika